Very ny angona amin'ny ambaratonga avo kokoa amin'ny rahona iCloud | Avy amin'ny mac aho
Very ny data amin'ny ambaratonga avo kokoa amin'ny rahona iCloud
Pedro Rodas | | iCloud, High Sierra macOS
Ny fomba fiasan'ny Cloud cloud iCloud Raha ny momba ireo rakitra izay ampifanarahina na tsia amin'ny Mac mankany aminy na avy amin'ny fitaovana iOS dia mbola tsy fantatra tanteraka ho an'ny mpanaraka Apple maro. Na izaho aza dia nianatra antsipiriany kely nefa tena lehibe Tsy fantatro noho ny olana iray izay niainan'ny olom-pantatra iray amin'ny fitahirizany rahona iCloud.
Ny olanao dia rehefa avy nanodina ny fampandrindrana ny rakitra Mac avy amin'ny toerana Documents sy Desktop ianao dia tsapanao fa mila mividy toerana bebe kokoa ianao. Nanomboka tamin'ny fananana 50GB ka hatrany amin'ny dingana manaraka an'ny 200GB. Hatreto dia marina ny zava-drehetra, saingy inona no nahagaga anao rehefa nanapa-kevitra ny hanafoana ny lahatahiry roa ianao mba hitehirizana toerana ao amin'ny iCloud ary hahafahanao midina indray hanana 50GB nifanarahana. Nilaza taminy ny rafitra fa mbola sahirana amin'ny gig maro ao amin'ny iCloud amin'ny ambaratonga avo kokoa izy.
Inona izany amin'ny ambaratonga avo kokoa? Tsy faly tamin'ity fomba fiasa ity, ny zavatra nataony dia nilaza tamiko momba ny olana, izay tsy hitako ny vahaolana ary izany dia amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny Mac sy ny fitaovana iOS ary fanesorana izay heverina fa tsy tadiavina intsony, nilaza hatrany ny rafitra fa hanafaka ny habaka ilaiko hamafana ireo rakitra avy amin'ny ambaratonga ambony iCloud.
Satria tsy fantatray hoe inona no tondroin'ilay rafitra raha nilaza izany ny ambaratonga avo indrindra, dia niantso antso ho an'ny serivisy teknikan'i Apple izahay izay nilaza taminay, tamin'ny voalohany, fa raha tianao izany dia azonao atao ny mamafa ny eran'ny iray manontolo. Cloud cloud iCloud hanombohana amin'ny dingana amin'ny zero. Nilaza taminy ny mpiara-miasa amiko fa nanaiky ilay tolo-kevitra izy, saingy rehefa afaka minitra vitsy dia nampandre azy ny mpanampy ny serivisy fa ny fomba voalaza etsy ambony dia tsy azo atao intsony noho ny politikan'ny Apple miasa toy ny fitehirizana iCloud. Raha fintinina dia tavela taminay ihany ny fisalasalana sy ny fitehirizana zavatra feno izay tsy teo.
Rehefa nahita ny olana aho dia nitady ny vahaolana mety ho vitako ary tonga tamin'ny kofehy miresaka momba io haavon'ny iCloud avo kokoa io aho. Ny haavon'ny iCloud ambony dia ny fisian'ny fampiharana iOS sy Mac manafina ny angon-drakitra amin'ny mpampiasa, ka raha misy rindranasa iray ao amin'ny iOS mamonjy fitehirizana 2GB ao amin'ny iCloud any amin'ny ambaratonga ambony ary mamafa ny rindranasa izahay nefa tsy miditra amin'ireo rakitra ireo amin'ny alàlan'ny fampiharana, izay irery ihany no mahita azy ireo, hijanona ho limbo ireo, handray toerana izy ireo fa tsy ho hitantsika amin'ny endrika fisie.
Raha fintinina, ny ezaka rehetra ataoko dia ny mahita ny fomba hidirana amin'ilay ampahan'ny rahona Apple miafina amin'ny mpampiasa mba hamafana izay rehetra misy ifandraisany amin'ireo rindranasa izay tsy ampiasainy. Ka alohan'ny hamafana ny rindranasa iray dia tsy maintsy hamarininao aloha raha mahay mitahiry angona ao anaty rahona ilay fampiharana, ka hamafana azy ireo ianao ary hamafa ny fampiharana avy eo amin'ny fitaovanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » High Sierra macOS » Very ny data amin'ny ambaratonga avo kokoa amin'ny rahona iCloud
Jose D'Angelo dia hoy izy:
Ary hijanona ao mandrakizay ve ireo angona ireo?
Valiny tamin'i Jose D'Angelo
spasy dia hoy izy:
Eny, eo amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany aho, afa-tsy ny tsy niantso an'i Apple. RAHA mahita zavatra ianao, ny voalohany, arahaba soa, ary ny faharoa hiandry aho, satria efa nanandrana ny zava-drehetra aho, na saika, avy amin'ny iMac, MacBook Pro, iPhone ary iPad ary tsy nahomby aho.
Mamaly an'i spasmual
Misaotra tamin'ny fampahalalana. Nahazo fampiononana bebe kokoa aho izao satria fantatro fa tsy izaho irery no voakasik'ilay ambaratonga ambony an'ny Apple ... lasa adala koa aho ary mitovy amiko ihany no mitranga amin'ny ambaratonga ambony any. Tsy misy fomba hahitana na hamafana azy. Manana gigabytes 18 variana amin'ny "tsy misy" aho satria nofongorako ny zavatra hita rehetra. Avia, jereo raha azo atao amin'ny terminal izany. .Misy mahay manao azy ve?
Ana Lopez Montes dia hoy izy:
Ao anatin'ny toe-javatra mitovy amin'izany aho. Milaza amiko izy fa ny antontan-taratasy voatahiry amin'ny ambaratonga ambony dia mitana ny 4,9G. Fafao ny zavatra rehetra voafafa ao amin'ny iCloud Drive fa tsy misy. Tsy afaka mitantana fitehirizana aho satria toa tsy manana zavatra hafa aho fa milaza amiko foana izay feno. Angamba ny safidy dia ny mividy tahiry bebe kokoa? raha eny, "tsara" lalaovin'i Apple ...
Manantena aho fa misy olona afaka manamboatra azy ary mizara azy!
Valiny tamin'i Ana López Montes
Salama, nisy nahita vahaolana ve?
mandeha ny volana nefa tsy misy vahaolana? ...
Mamaly an'i Do
Azafady !!!… Izaho dia eo amin'ny toe-javatra misy anao ihany… nahita vahaolana ve ianao?
Valio amin'i ANNA